NOOCYADA DARYEELKA EE BAASKIILADA XILLIGA NASASHADA IYO UBAXA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Cagaarshow cagaaran ah oo ubaxyo ah oo ubaxyadu ay u eg yihiin adhiga aroosyada quruxda badan ee quruxda leh waa baaskiil. Magaca kale ee cyclamen waa alpine violet. Wuxuu ka yimaadaa Mediterranean, sidoo kale wuxuu ku badan yahay waqooyi-bari Africa, Spain.
Cyclamen waxay leedahay ubax asalka ah iyo midab aad u ballaaran. Waxaa jira baraf cad, dhar guduudan, dhammaan noocyada kala duwan ee midabyada casaan, casaan iyo burgundi. Iyo waxa gaar ahaan fiican, ubax soconaya ilaa 3.5 bilood.
Kudhuuf alpin laga bilaabo qeybtii dambe ee Oktoobar illaa dhammaadka March. Cyclamen - geedka ma aha mid aad u adag, laakiin qaar ayaa leh aragti ka duwan. Xaqiiqdii, haddii aad raacdo talooyinka qaarkood, dhibaatooyinka ubaxu ma kici doonaan.
Sida loo doorto dukaanka saxda ah ee dukaanka
Ka fiirsashada dukaanka ubaxa qoyaan leh ubaxyo qurxoon oo qurux badan, way adag tahay in laga hortago gadashada. Sida laga soo xigtay xeerarka, doorashada ee ubax ayaa ku xiran ma aha oo kaliya on midabka of inflorescences ah, waxaa haboon in ay fiiro gaar ah u xaddidaadaha kale ee geedka. Nidaamka ayaa xushay kormeerka gobolka ee xididada, kuwaas oo lagu arki karo godka dufanka dheriga. Waa muhiim in xididada ay ku jiraan xaalad wanaagsan iyo in aysan jirin wax caleemo ah.
Ubax waa inuusan lahayn caleemo huruud ah, waana fiicantahay marka ay jiraan tiro badan oo burooyinkooda aan la furin. Biyaha ayaa ka sii fiican. Caleenta warshadu waa inay noqotaa mid adag, waa inay jirtaa caws ubax ama ubaxyo qashin ah.
Daryeelka Cyclamen inta lagu jiro ubax
Daryeelka baaskiilada ee guriga wuxuu ku xiran yahay daryeelka si loo doorto boos loogu talagalay ubax, xakamaynta heerkulka, waraabinta habboon, quudinta wakhtiga ah iyo daawashada qoyaanka lagama maarmaanka u ah geedka.
Cyclamen jecel nuurka. Waa in lagu dhejiyaa daaqadaha daaqadaha ee daaqadaha, kuwaas oo aan ku dhicin qorraxda tooska ah, laakiin leh badan oo ah iftiin. Badanaa meelaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'cyclamen' waa daaqada dhinaca waqooyiga ee guriga.
Cyclamen inta lagu guda jiro xilliga ubaxku waa inay ahaadaan kuwo qabow. Wuxuu noqon doonaa heer kulul + 12-15 ° C. Waa wax xun haddii heerkulku hoos u dhaco 10 digrii ama kor u kaca 20 darajo.
Wixii kobcin wanaagsan iyo wanaagsanaato ubaxa, hawada ku wareegsan waa in la nadiifiyaa. Tani waxay ka caawinaysaa buufinta caadiga ah. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in qoyaanka la buufiyo aan si toos ah u dhicin geedka laftiisa.
Waraabiyo iyo quudinta ciidda
Warshadku wuxuu ahaa mid raaxo leh muddada ubax, waa in si joogto ah loo waraabiyo. Marka waraabiyo biyaha waa in aysan ku dhicin aagga cayayaanka ee cormer, on caleemaha iyo ubaxa dhirta. Hababka wanaagsan ee waraabinta - u dhow dheriga dheriga, ama biyo ku shub digsiga. Waqti kasta inta lagu guda jiro nolsha dhirta, waxaa muhiim ah in aan ka badan ciidda.
Burburinta quudinta xilliga ubaxa waxaa la sameeyaa 2 asbuuc walba. Wixii tan, Bacriminta macdanta ayaa loo isticmaalaa. Wixii bacarimiso, waxaad diyaarin kartaa bacriminta fosfate-potassium: qaadan 1 g of superphosphate iyo 0.5 g of potassium sulfate 1 l oo biyo ah.
Daryeelka Cyclamen inta lagu jiro nasashada
Dhirta badani waxay si firfircoon u koraan oo u horumariyaan xagaaga, siiyaan ubaxyo iyo miraha. Laakiin sida cyclamen, warshad this Blooms xilli xilli qabow. Daryeelka baaskiilada xagaaga ayaa ah mid muhiim u ah sidii uu uga baxayo xilliga ubaxa. Xaqiijinta taxadarka inta lagu jiro xilliga nasashada waxaay qeexi doontaa sida ubaxa uu u barbar dhigi doono xilliga firfircoon.
Waa muhiim! Waxaa la aaminsan yahay in haddii xilliga xilliga nasashada ee dhirta ay sii socoto si firfircoon u barbar dhigto, ka dibna waa inay noqoto mid dabiici ah hawlgab ah - taas oo ah, googooyso burooyinkeeda iyo caleemaha. Laakiin waayo-aragnimada noocaas ah ma keento wax wanaagsan, ubaxyada sida jirran oo inta badan u dhintaan.
Diyaarinta xilliga nasashada, baclinta waxay sii wadi kartaa inay sameeyaan caleemo cusub, halka kuwa waayeelka ahi huraan noqdaan oo u dhintaan. Caleemaha dhintay waa in laga saaraa. Isla mar ahaantaana, tuubada waxay ku kaydisaa nafaqooyinka la isticmaali doono inta lagu jiro ubaxyada xiga.
Waxaa muhiim ah in la raaco xeerarka sida loo wacyi geliyo biyaha guriga inta lagu jiro nasashada. Waa fikrad khaldan ah in bacda aan loo baahnayn in la waraabiyo muddadan. Haddii xad dhaafka ah ee ciidda la oggol yahay, ka dibna waraabinta dhirta si weyn, dildilaaca ayaa laga yaabaa inuu ka muuqdo tuber. Dildilaashadani maaha kuwo khatar ah, laakiin kaliya haddii aysan helin biyaha. Haddii ay ku dhacaan hurdo la jajabiyey, dildilaaca dhowr maalmood ayaa lagu dabooli doonaa qolof ah cufan.
Inta lagu jiro xilliga nasashada, waxaa loo baahan yahay waraabin dhexdhexaad ah si looga hortago in lakabiyo tubada. Bacriminta wicitaanada xilligaas ma khuseeyaan. Si looga hortago looska, waxaad ku dari kartaa dhawr dhibcood oo ah phytosporin biyaha inta lagu jiro waraabinta.
Marka la eego iftiinka xagaaga, geedka waa in laga ilaaliyaa qoraxda tooska ah. Coolness ma aha lagama maarmaan, laakiin haddii ay suurtagal tahay in la dhigo ubax ee hooska a qabow, ka dibna waxay noqon doontaa raaxo halkaas.
Muddada hurdada ayaa socota muddo 2-3 bilood, ka dib caleemaha cusub iyo burooyinkeeda cusub waxay bilaabaan inay muuqdaan.
Qalitaan Isbeddel ah
Marka aad iibsaneysid, waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo baahida loo qabo in lagu beddelo qadar baaskiil ah. Dhirta Holland waxaa badanaa laga helaa substrate peat ah, taas oo loogu talagalay in lagu qaado ubax, laakiin ma aha mid ku habboon koritaanka dhirta muddada dheer.
Soo celinta waxaa la samayn karaa hal mar sanadkii, ka hor inta ubaxyada ubaxyada. Waqtiga ugu haboon waxaa loo tixgeliyaa dhamaadka bisha Agoosto iyo Sebtembar, marka heerkulka hawadu hoos u dhacdo waxay saameyn ku leedahay koritaanka.
Qalabaynta waxaad u baahan doontaa ciidda caadiga ah ee la iibsaday. Waxaa loo diyaarin karaa qaybaha soo socda: peat, humus, ciid iyo dhul caleen. Caleenta caleenta ah ee isku dhafka ah waa in ka badan inta ka hadhay maaddooyinka kale. Warshad waa in laga saaraa dheriga oo si tartiib ah u nadiifiyaa xididdada peat ee haray. Haddii geeddi-socodka uu muujiyo gooynta cayayaanka, waa in laga saaraa.
Ka hor inta aanad dhoofin, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid dheriga loo baahan yahay for cyclamen. Cabbirka dheriga wuxuu ku xiran yahay da'da ubaxa. Wareegga 1-1.5 sano jir, dherer leh dhexroor ilaa 8 cm ayaa loo doortaa. Seddax sano oo wareeg ah, dheri leh dhexroor ilaa 15 cm ayaa ku haboon.
Qeybta hoose ee dheriga waa inay noqdaan godo dheecaan leh, haddii aanay asal ahaan ahayn, waad naftaada u qaban kartaa. Ka dib markaa, hoos ayaa loo dhigaa dheecaan - dhoobo ballaaran ama dhagaxyo. Iyada oo gacan laga helayo dheecaan, waxaad ka fogaan kartaa dhirta dermaha ah.
Ka hor intaan la beerto geedo cusub, waxaa lagula talinayaa in lagu shido foornada ilaa hal saac. Ama waxaad ku samayn kartaa digsi ama geeddi-socodka ciidda leh kiniinka potassium. Tallaabooyin noocan oo kale ah ayaa loo baahan yahay si loo ilaaliyo dhirta laga qaado infekshanka suurtagalka leh cudurrada fangas.
In habka transplanting laftiisa, isku dar ah dhoobo ee dheriga uma baahna in la tamped. Laga soo bilaabo dhirta waxaad u baahan tahay inaad ka saarto caleemo dhowr ah, kaas oo gacan ka geysanaya xoojinta caafimaadka geedka.
Waa muhiim! Ka saar caleemaha qadiimka ah adoo googoynaya, oo kaliya ha jeexin.
Cagaarka laftiisa waa in si taxadar leh loo dhigaa dhexda dheriga cusub, isagoo meel ku haya si uusan u dhaawacin nidaamka xididka. Xirmooyinka waa in la toosiyaa oo si tartiib ah loogu daboolo dhulka. Tuberaha laftiisa uma baahna in si buuxda dhulka loogu daboolo, waa in ay wax yar ka eegaan dusha.
Qalitaanka ka dib, ciidda waa la waraabiyaa waxaana loo oggol yahay inay nuugto. Ka dibna waraabinta waa soo noqnoqda, dhulkuna wuxuu ku darayaa dheriga. Laakiin xitaa marxaladdan ka dib, tuberku waa inuu qayb ahaan ka sarreeyaa dhulka.
Waa muhiim! Ka dib marka la isu tallaalo, bacriminta laguma dabbaali karo laba ilaa saddex toddobaad.
Laba siyaabood oo loo jajabin karo bislaan
Waxaa jira laba siyaabood oo ugu caamsan:
Marka la faafin karo abuurka, waxay u baahan doontaa in muddo dheer sugto ubax intii lagu guda jiro dhalmada iyada oo tuber ah. Mudada ugu fiican ee abuurka abuur waa August.
Ka hor inta beero, miraha waxaa lagu shubay 5% sonkorta sonkorta. Kaliya abuurka oo hoosta ku dhajiya ayaa la qaadaa, kuwa soo if-baxaana maaha kuwo ku haboon. Maalin kale oo miraha ayaa lagu qooyay xalka zircon.
Seeds lagu beeray isku dar ah oo dhul iyo peat ah - waxay ku dhajiyeen dusha sare iyo khafiif ah ku rusheeyeen on top of lakabka khafiif ah ee dhulka. Heerkulka biqilka waa inuu si fiican u noqon karaa 20 ° C. Xagga sare ee beeritaanka waxaa lagu daboolay filim daahir ah, oo mararka qaar laga saaro waraabka iyo hawo qaadashada ciidda. Geedo waa in ay koraan 30-40 maalmood.
Ka dib markii biqil, shoogga laga saaro, dhirta dhalinyarada ah ayaa lagu meeleeyaa jawi aan qorraxdu si toos ah iyo heerkul ah 15-17 ° C. Ka dib muuqaalka laba ama saddex caleemo iyo samaynta tuber yar, dhirta dheefta. Tani waxay dhacdaa bisha December. Ka dib markaad qaadato warshad toddobaad gudaheed, waxaad ku dari kartaa bacriminta ubaxa qiyaasta la qiyaasay.
In dheryaha shakhsi ahaan, cyclamen waxaa laga beeray abuurka April - May. Waxay Bloom 13-15 bilood ka dib beeridda.
Marka lagu daro abuurka taranka, cyclamen waxaa loo qaybin karaa qaybinta tuber. Waxaa suurtagal ah in la soo saaro dhalashada sida kaliya ee muddada dormancy ee warshadda. Basasha ayaa laga soo saaray dhulka, waxoogaa la qalajiyey. Ka dib markaa, waxaa loo jaraa qaybo dhowr ah. Qayb kasta waa in ay leeyihiin xididada nool oo xoog leh iyo burooyinkeeda. Dhammaan qaybaha xididka waxaa lagu shaqeeyaa dhuxul la jajabiyey oo mar kale la qalajiyey. Qiyaas ahaan maalinta saddexaad, qaybo ka mid ah tuber waxaa lagu beeray karaa dhulka, mid kasta oo dheriga.
Kala saarista adoo qaybsanaya tuubada mar walba ma guulaysan, waxaa jira halis ah in dhirta laga lumiyo.
Guryaha dawooyinka ee baaskiilada
Cyclamen wuxuu ka kooban yahay walaxyo leh bogsashada guryaha. Waxaa ka mid ah: cyclamine, saponin, walxaha qadhaadhka ah.
Ma taqaanaa? Cyclamin wuxuu leeyahay sun u gaar ah. Laakiin jawiga qoyan, waxay ku dhacdaa hidrolisyada iyo isu beddelidda cyclamyrethine, oo leh saameyn bogsashada.
Casiirka Cyclamen wuxuu leeyahay waxyaalahan soo socda:
ficilka lidka ku ah;
waxay xakameysaa jadeecada loo yaqaan "pathogenic flora" oo keena cudurada mareenka mindhicirka;
Ba'an ayaa xanuunka ku jira laabotooyinka, gout, cudurada kudubyada iyo lafaha.
Casiirka cusub ee bislaanku waa cadad maxillary cad. Waxaa la diyaariyaa digriiga cusub, kuwaas oo lagu jajabanayo xaalad muruq ah. 10 qaybood oo biyo ah ayaa lagu daraa qashir ka soo boodada waxayna ku noolaadaan faashad. Daawada keentay waxaa lagu dari karaa sanka, 1-2 dhibcood. Isku dar isku mid ah oo ku jira qaabka qulqulka waxaa loo isticmaalaa cudurrada cudurada dumarka.
Ma taqaanaa? Cyclamen loogu talagalay cuntada sida caadiga ah loo goosto dayrta. Digriiga waa la qodayaa oo loo diraa dib u warshadaynta. Haddii aad qashinaysid tuubo mar kale, isaga ma yeelan doono awooddaas waxtarka leh.
Isku-daboolka saliidda qudaarta, cabitaanka soodhada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo sinusitis. Isku-darkaani wuxuu keenaa hindhisada iyo kor u qaadista sunta.
Haddii qashir ka yimaado qulqulaya khamriga ama vodka oo ku adkeyso 2 toddobaad, waxaad heleysaa tincture khamriga. Tincture qaaday 15-30 dhibcood ilaa 3 jeer maalintii. Sida xayawaanku wuxuu ka caawiyaa xanuunka rheumatic, xanuunka laf dhabarta iyo waxaa loo isticmaalaa xoqidda.
Faleebo kulul ayaa lagu diyaariyaa adigoo ku shubaya 1 qaado oo ah rootiyada bislaado leh laba koob oo biyo ah. Waa lagama maarmaan in la aqbalo isha diirada 1 qaado oo cunto kadib. Waxaa loogu talagalay dhibaatooyinka hurdada, oo ka sii daran nidaamka dareenka. Sidoo kale faleebo kulul ee cudurada ee mareenka caloosha iyo caloosha.
Iyadoo la raacayo sifooyinka faa'iidada leh ee baaskiiladu waxay noqon kartaa waxyeello caafimaad. Contraindications waxaa ka mid ah jiritaanka xasaasiyadaha dhirta, uurka, naas nuujinta iyo da'da ilaa 7 sano. Daawooyinka ku salaysan Cyclamen waxa kaliya oo loo qaadan karaa sida dhakhtar soo qoray.
Foomka aan la marin, baalalka ayaa gubi kara xuubka xuubka. Cudurka qanjidhka ka badan ayaa sababa qandho. Xaaladaha ba'an, hawsha nidaamka wadnaha iyo xididada ayaa dhibta, bararka sambabada iyo bronchospasm.
Cudurada iyo cayayaanka: qaababka daaweynta iyo daryeelka muddadaas
Cyclamen wuxuu u nugul yahay cudurrada qaarkood iyo cayayaan cayayaanka. Inta lagu jiro waqtiyada adag, dhirta waxay u baahan tahay daryeel gaar ah.
Sababaha dhimashada kicinta:
rotting peduncles iyo caleemo.
Xaalado badan, dhirta waa la badbaadin karaa haddii aad aragto calaamadaha cudurka wakhtigaa oo tallaabo qaado.
Cudurrada Cyclamen iyo daaweyntooda:
Caleemaha Jaalaha ah. Cudurkan wuxuu dhacaa marka uu dhirta ku nool yahay heerkulka ka sarreeya 18 digrii, hawada qolkuna waa qalalan yahay. Si loola dagaallamo oo looga hortago caleemo huruudka ah, hawo ku wareegsan geedka waxaa lagu qoyaa biyo lagu buufiyo, iyo dhirta waxaa la dhigayaa meel aan lahayn qalabka kuleylka si loo hagaajiyo heerkulka.
Cirridka caleenta caleen. Cudurkan waa dabeecadda dhirta oo dib u qoyay ciidda. Waxa kale oo ay u badan tahay in warshadu ay barooran doonto marka biyaha galo sare ee tuber. Si loola dagaallamo cudurkan waxaad u baahan tahay inaad bixiso dheecaan wanaagsan. Dheriga waxaa lagu dhejiyaa weel qashin ah oo la kontaroolo si ay cirbadaha qoyan yihiin.
Dareemista caleen. Cudurkan ayaa u muuqda sababtoo ah joogitaanka cayayaanka - cayayaanka bisil. Waa mid aad u yar, oo la mid ah boodhka caadiga ah. Mite wuxuu ku yaalaa xagga hoose ee caleen caleen. Iyadoo ay soo ifbaxday caarada bislaan, koritaanka dhirta ayaa hoos u dhacda, geesaha caleemaha ayaa la duudduubay. Daaweyntu waa ka saarista caleemaha saameeyeen iyo miirista kaneecada suntan.
Fusarium Cudurka fungal ee saameeya unugyada dhirta iyo hababka xididada. Pathogens galaan ciidda iyada oo loo marayo nidaamka xididka. Caleemaha sare waxay noqdaan huruud, badanaa hal dhinac. Warshadu ma siinayso ubax mugga ku filan mana u muuqdo mid aad u wanaagsan. Wixii daaweynta ee hoose hoose ee 0.1% waraabinta ee xididka iyo buufinta leh topsin-M 0.1%.
Fungus Black. Haddii dhirta ay ku nool yihiin aphids, waxay ka baxaysaa dheecaan macaan on caleemaha cyclamen. Kadibna fangas ayaa u muuqda. Khatartu waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in warqaddu aanay helin iftiin ku filan. Geedku wuxuu daciifiyaa oo u sii kordhiyaa koritaanka. Daaweynta, lakabadda waa in laga saaraa maro qoyan iyo caleemaha lagu daaweeyo saabuun iyo naxaas.
Anthracnose. Sheegay inta lagu jiro ubax. Anthracnose waxay si firfircoon ugu socotaa qoyaan iyo kuleyl, waxay saameeysaa caleemaha iyo caws ubaxa. Ubaxa wuxuu u engegaa, ubaxu ma dhicin. Marka xigta, infekshanku wuxuu u gudbaa caleemaha, waxay ku wareegaan tuubo, caleemaha hore waxay u dhintaan. Si loola dagaallamo anthracnose, waxaa ugu horeysa lagama maarmaan in la yareeyo qoyaanka, ka saar caleemaha dhaawacan iyo dhajinta dheriga 2-3 jeer sidii fungicide.
Qalabka qoyan. Kani waa cudur bakteeriyadeed. Cyclamen way engegtay, caleemo dhicin, tuber ayaa ka soo baxaysa ur ah. Xididdada kallana warshad. Cudurku wuxuu ka yimaadaa meelaha caleemaha ama nabarrada on afkoda, iyo bakteeriyada pathogenic waxay u gudbin kartaa warshadda iyada oo loo marayo biyo. Cudurkaan waa mid aan la daweyn karin, geedka waa in la burburiyaa haddii uu waxyeelo soo gaadhay.